Isixazululo se-Electrode Surface Fouling - Hielscher
Ukungcoliswa kobuso be-electrode kuyinkinga enkulu ezinqubweni eziningi zokukhiqizwa kwe-electrochemical nakuzinzwa ze-electrochemical. Ukudlidliza i-electrode kungathinta ukusebenza nokusebenza kahle kweseli kagesi. I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokugwema nokususa ukungcolisa kwe-electrode.
Ukudlidliza i-electrode kunciphisa ukuthintana okungokomzimba kwe-electrolyte ne-electrode yokudluliselwa kwe-electron kuye ngakho-ke kunciphisa isivinini sokuphendula ngama-electrochemical. Imvamisa i-ejenti engcolisayo inamathela ezicini ezithile zesakhiwo ebusweni be-electrode ngenxa yokuhlangana kwe-hydrophilic, hydrophobic, noma i-electrostatic phakathi komenzeli odlalayo kanye ne-electrode surface.
Izindlela ze-antifouling zifaka ukuguqulwa komhlaba noma ukumbozwa ngama-polymers noma izinto ezisuselwa kukhabhoni, ezinjenge-carbon nanotubes noma i-graphene, ngenxa yendawo yazo enkulu, izakhiwo ze-electro-catalytic, nokumelana okungcolile. Ngenye indlela, ama-nanoparticles ensimbi angaba nezindawo zokuthambisa ezihlanganiswe nezakhiwo ze-electro-catalytic kanye nokuqhutshwa kwamandla kagesi okuphezulu.
Ultrasonic mechanical ukuyaluza kuyindlela ehlukile yokuqhafaza.
Ultrasonic ukuyaluza kwe-antifouling isebenzisa imvamisa ephezulu, amandla amakhulu omsindo kuketshezi ukwenza lula noma ukuthuthukisa ukususwa kwama-agent angcolisayo ezindaweni ezifakwe ngaphakathi kuketshezi olwenziwe nge-ultrasonically. I-Ultrasonic electrode surface yokuhlanza ubuchwepheshe obungehlukile ekhonweni layo lokususa ama-agent angcolile ezindaweni ze-electrode. Ubuchwepheshe bokuhlanza i-Ultrasonic buyakwazi ukungena buhlanze noma iyiphi indawo enamanzi ye-electrode, kufaka phakathi izimbobo eziyimpumputhe, imicu, imigqa engaphezulu.
Izidingo zokuhlanzeka kwenhlabathi okuphezulu kwe-electrode ziqhube ukuthuthukiswa kobuchwepheshe be-ultrasonic ukuyaluza. Namuhla kungenzeka ukuxubanisa ama-electrode ngemishini kumvamisa we-ultrasonic noma ukuvusa uketshezi eduze kwe-electrode ngokuhlanza okungaphezulu kwe-electrode surface.
Engaqondile electrode Surface Antifouling
Ku-antifouling engaqondile yezindawo ze-electrode, amandla e-ultrasonic alethwa kuketshezi eliseduze ne-electrode. Lokhu kuketshezi kukhangisa amandla e-ultrasonic futhi kudlulisa ingxenyana yala mandla ebusweni be-electrode, lapho i-cavitation ye-ultrasonic evelayo isusa izingqimba ezingcolile. Ngokuvamile, le ndlela engaqondile "ingumugqa wokubona" emvelweni; okungukuthi, kufanele kube nokufinyelela okuqondile endaweni engcolile ukuze isebenze.
I-Ultrasonic Electrode (i-Cathode) yoSicelo ku-Sono-Electrochemistry
Incazelo: Ukungcolisa i-electrode
Ukudlidliza kwe-electrode kuchaza ukwedlula kobuso be-electrode ngomenzeli odlalayo owakha ungqimba olwandayo olungenakunqobeka ku-electrode. Imvamisa, i-ejenti ekhohlisayo ingumkhiqizo wokusabela kwe-electrochemical.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza umklamo oyingqayizivele we-ultrasonic ukuvusa ama-electrode ngqo. Kulomklamo, ukudlidliza kwe-ultrasonic kuhlanganiswe ngqo ku-electrode. Ngakho-ke amandla e-ultrasonic alethwa endaweni emanzi ye-electrode, lapho ukusheshisa kobuso nokuwa kwamabhamuza e-cavitation athintana nomphezulu kunikeza i-jet yengcindezi ephezulu yomswakama ebusweni. I-Ultrasonic jetting iyindlela enhle yokugwema nokususa izingqimba ezingcolile.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela imininingwane eyengeziwe maqondana nokususwa kwe-ultrasonic kwe-electrode surface fouling. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho.
Eminye imiphumela engenzeka yokuphazamiseka kwe-ultrasonic ohlelweni lwe-electrochemical ifaka:
thuthukisa i-hydrodynamics nokuthuthwa kwabantu abaningi;
kuthinta ama-gradients wokuhlunga kanye nokushintsha kwemibuso ye-kinetic ngokusebenza kumishini yokwenza kanye nokuphendula;
ukwenziwa kwe-sonochemical kokuphendula kwezinhlobo eziphakathi ezikhiqizwe ngogesi; futhi
ukukhiqizwa kwe-sonochemical yezinhlobo ezisabela ngogesi ezimeni lapho uhlelo oluthule lungasebenzi ngogesi.
Izinhlobo ze-Electrode Fouling
Ukungcola okuvela ekuhlanganyeleni kwe-hydrophilic kuvame ukubuyiselwa emuva kunokungcolisa okuvela ekusebenzisaneni kwe-hydrophobic. Ama-electrode anezindawo eziningi ze-hydrophobic, njengama-electrode asuselwa kukhabhoni angakhuthaza ukungcola okuphethe izinto ze-hydrophobic, ezinjengezinhlanganisela ezinamakha, izinhlanganisela ezigcwele noma ze-aliphatic, noma amaprotheni. Ama-macromolecule webhayoloji, njengamaprotheni nezinye izinto zebhayoloji, amaseli, izingcezu zamaseli, noma i-DNA / RNA kungadala ukungcola kwe-electrode surface, futhi.
I-High Power 2000 Watts Ultrasonic Cathode kanye / noma i-Anode ku-Batch Setup